I-China kuya eTurkmenistan-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Inkomba Yezinsizakalo>I-Central Asia Line>China ukuya eTurkmenistan
Kuthunyelwa kusuka eChina kuye eTurkmenistan
Ngisho nezinsizakalo zokuthumela zisuka eChina ziye eTurkmenistan zivuthwe kakhulu kulezi zinsuku, abakwa-SHL bangahlala bezama ukwenza izinto zokusebenza kangcono, ngaphandle kwesixazululo esihle kakhulu kanye nensizakalo enhle, singanikeza namanani wokuncintisana asuka eChina aye eTurkmenistan.
I-SHL izosiza ukukhetha kwakho indlela ehamba phambili yokuthumela, izindleko zokuthumela ezincintisanayo nezinkampani ezihamba phambili zokuthumela ukusiza ukuhambisa kwakho kusuka eChina kuye eTurkmenistan.
I-China Railway Express isuka eChina iya eTurkmenistan
Ukuhamba ngesitimela esindayo esindayo kusuka eChina kuya eTurkmenistan
Ukuhamba ngeRo-Ro / Break Strk kusuka eChina kuya eTurkmenistan
I-SHL inganikeza i-RORO ROROMAFI BREAKBULK ngemishini enembile, izimoto nemishini esindayo kusuka eChina kuya eTurkmenistan Singanikeza isixazululo esisodwa sokuma kanye nezindlela ezenziwe ngazo.
Ukuthunyelwa Kwasolwandle Olwandle kusuka eChina kuya eTurkmenistan
I-SHL inenqwaba yokuqina kwezimpahla zokuthumela isuka eChina iye eFelixstowe, eSouthampton, njll. Ukuze njalo sikwazi ukuthola umthwalo olwandle oluhle oluya echwebeni laseTurkmenistan kusuka kubantu abathwali abaningi, futhi futhi singenza isiqiniseko sokuthi indawo yesitsha ikhona ngisho nangesikhathi esiphakeme kakhulu.
Ukuhanjiswa Kwempahla Yomoya kusuka eChina kuya eTurkmenistan
Kuneziteshi eziningi zezindiza zamazwe omhlaba eziyisisekelo eTurkmenistan futhi kunezimpahla eziningi zokuthumela ezivela eChina ziye eTurkmenistan ngendiza, i-SHL inganikeza umthwalo womoya wokuncintisana ophansi kakhulu kunemakethe kuya kumakhasimende ethu ngokuya ngehlelo lakho lokufuna.
I-China ibanga elingamakhilomitha angama-7,775 ukusuka eTurkmenistan kodwa ukudabula leli banga kungathatha isikhathi eside ngenxa yemizila yolwandle echazwe yimizimba yamanzi.
Izikhumulo Sezindiza Eziyinhloko eTurkmenistan
Isikhumulo sezindiza i-Ashgabat Isikhumulo sezindiza saseTurkmenbashi
Isikhumulo sezindiza saseTurkmenabat Isikhumulo sezindiza iMary
Isikhumulo sezindiza i-Daşoguz
Isikhumulo sezindiza iBalkanabat
Isikhumulo sezindiza sase-Craten East
Isikhumulo sezindiza i-Dzhebel Air Base
Isikhumulo sezindiza saseGaurdak
Isikhumulo sezindiza sasePitnyak
Isikhumulo sezindiza i-Ashgabat Bezmein
Isikhumulo sezindiza iBekdash
Isikhumulo sezindiza iKerki
Isikhumulo sezindiza i-Kizyl-Arvat
Isikhumulo sezindiza iMary North
ISairghs Southeast Airport
Isikhumulo sezindiza saseKala-I-Mor
Isikhumulo sezindiza i-Gyaurs Airfield
Izinhlobo Zokuthunyelwa kusuka eChina ziye eTurkmenistan
Yikuphi itheku okufanele ngilisebenzise ukuze ngithuthe kusuka eChina ukuya eTurkmenistan?
Ngoba udinga itheku elingakuxhumanisa ngqo neTurkmenistan
Yisiphi isikhathi esiphelele esithathwa ngomkhumbi sisuka eChina siye eTurkmenistan?
Ngamafuphi, ungazicijisa kuzo zonke lezi ukuthola sonke isikhathi esizothatha umkhumbi usuka eChina uye eTurkmenistan
Abahambisi bezimpahla abanjalo bayayazi imithetho nemigomo elawula ukungenisa kusuka eChina kuye eTurkmenistan